मनिषाले लेखिन् फेरी द,मदार ट्विट्, गरिन् सारा नेपालीलाई यस्तो आग्रह ! - Filmy News Portal Of Nepal
अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले लिपुलेक , लिम्पियाधुरालाई लिएर एक ट्विट् लेखे लगत्तै उनले फेरी नेपालमा चर्चा बटुलिन् र फ्यान पनि । उनको समर्थनमा सारा नेपाली जुटेपछी उनी भारत छाडेर लकडाउनकै बिचमा उनी नेपाल आईन् । उक्त ट्वीटलाई लिएर भारतीय मिडियाहरु मनिषामाथि निकै ख,निएका थिए । हालै उनै मनिषाले सरकार वि,रुद्ध भइरहेको प्रदर्शनलाई लिएर हिजोको दिन प्र,दर्शन गर्न उचित समय नभएको जनाएकी छिन् । उनले कम्तिमा एक दिन सरकारलाई सडकबाट द,वाव दिनु (प्रदर्शन गर्नु) उचित नभएको जनाएकी हुन् ।
संघीय संसदमा (शनिबार) देशको नयाँ नक्सालाई आधिकारिकता दिने गरी संविधान संशोधन गर्ने महत्वपूर्ण काम भएका बेला युवाहरुले आ,न्दोलन गर्न नुहेने बताएकी हुन् ।
सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा मनिषाले लेखेकी छन्, ‘टाइमिङमा निश्चितरुपमा प्रश्न उठाउन योग्य छ । मैले सँधै महसुस गरेकी छु कि सरकार पारदर्शी हुनुपर्छ । सरकारले अहिले यति ठूलो कदम चाल्न गइरहेको छ । प्रदर्शनमा किन यसलाई समर्थन थोरै मात्रै मिलिरहेको छ ? आजकै दिन कि उनीहरु सरकारमाथि द,वाव दिइरहेका छन् ?’
एक साताअघि मनिषा परिवारसहित भारतबाट नेपाल आएकी मनिषा एक होटेलको क्वा,रेन्टाइनमा बसिरहेकी छन् । उनले कोरोना भा,इरसको सं,क्रमण फैलिने ख,त,राकाबीच आ,न्दोलन तथा भी,डभा,ड गर्न नहुनेतर्फ पनि सचेत गराएकी छिन् ।